Football Khabar » स्वारेजले गरे यो सिजनलाई बाई–बाई : चार महिना मैदानबाहिर रहने पक्का !
स्वारेजले गरे यो सिजनलाई बाई–बाई : चार महिना मैदानबाहिर रहने पक्का !
सिजन मध्यभागमा पुगेका बेला स्पेनिस बार्सिलोनालाई ठूलो झट्का लागेको छ । उसका एक प्रमुख फरवार्ड लुइस स्वारेज चोटका कारण ४ महिना टोलीबाहिर रहने निश्चित भएको छ । आइतबार बार्सिलोना क्लबले अफिसियल रूपमा प्रेस नोट जारी गर्दै उरुग्वेन स्वारेज ४ महिना टोलीबाहिर हुने पुष्टि गरेको हो ।
बार्सिलोनाले स्वारेजको घुँडामा चोट परेकाले उनको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएको हुँदा उनी लामो समय मैदानबाहिर रहने जनाएको छ । स्वारेजको अप्रेसन डा. रोमान कुगाटले गरेको पनि क्लबले जनाएको छ । अप्रेसन आइतबारै भएको हो ।
स्वारेजको अप्रेसन सफल भएपछि बार्सिलोनाले प्रेस नोट जारी गरेको हो । ३ दिनअघि स्पेनिस सुपर कपको सेमिफाइनलमा एथ्लेटिको मड्रिडविरुद्ध खेल्नेक्रममा स्वारेज घाइते भएका थिए । बार्सिलोनाले ३–२ ले हारेको सो खेलमा उनले पूरै खेल खेल पनि पछि चेकजाँचबाट उनी घाइते भएको पुष्टि भएको थियो ।
यससँगै स्वारेजका लागि यो सिजन करिब–करिब सकिएको छ । उनले ला लिगा, च्याम्पियन्स लिग र कोपा डेल रे कम्तीमा २१ खेल गुमाउने छन् ।
जारी सिजन स्वारेजले बार्सिलोनाका कूल २३ खेल खेल्दै १४ गोल गरेका छन् भने ला लिगामा ७ गोल असिस्ट गरेका छन् । उनी ला लिगाका सर्वाधिक असिस्टकर्ता हुन् । उनले लिगमा ११ गोल र च्याम्पियन्स लिगमा ३ गोल गरेका छन् ।
स्वारेजले गुमाउने खेल तालिका :
प्रकाशित मिति २७ पुष २०७६, आईतवार २३:२०